Hiriira deeggarsaa Dr. Abiy: Benishaanguul 'Toongootti 2 ajjeefaman, 40 miidhaman - BBC News Afaan Oromoo
Hiriira deeggarsaa Dr. Abiy: Benishaanguul 'Toongootti 2 ajjeefaman, 40 miidhaman
Hiriira deeggarsa Dr. Abiyyif Sambata darbe naannoo Benishaangul Gumuuz aanaa addaa Maa'o Koomootti jiraattonni bahan hordofee waldhabdee dhalaten lammiileen 2 yeroo ajjeefaman 40 kan ta'an irratti miidhaan gahe.
Kanneen miidhaman keessaa 12 yaalii dabalataaf hospitaala Xiqur Ambassaa dabalatee kaanitti ergamuu isaanii hogganaan Bulchinsaa fi Nageenyaa Aanaa Begii, Obbo Haruun Baqqalaa BBC'tti himaniiru.
Jiraattonni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne BBC'tti akka dubbatanitti, gaafa Sambataa Ministira Muummee Dr. Abiyyif hiriira waan bahanif galgala isaa poolisiin manarra deeme akka isaan reebe himu.
Kuni maaliif ta'e jechaa komii dhageessisaniinis gaafa Dilbataa hoggantoonni aanaa Beegii fi kan Maa'oo Koomoo bakka argamanitti nagaan akka bu'u mari'atan waligalanis dargaggoota sirbaa manatti qajeele irratti rasaasni dhamamuu himu.
Rasaasa kana fuuldura waajjira poolisii magaalaa Tongootti kan jalqabe poolisii ta'uufi humnoonni nageenyaa itti dabaluu isaanii jiraattonni BBC'tti himaniiru.
Balaa osoo hin eegamin dhalate kanaanis ummanni rifatee yaaddoo keessa seenuu isaa akkasumas gara aanaa ollaa Oromiyaa, Aanaa Beegiitti, baqachuu isaanii jiraattonni maqaan isaanii akka hafu himan dubbataniiru.
Hogganaan poolisii magaalaa Toongootti bilbilluus dubbachuuf waan fedhii qaban miti.
Manni yaalaa Toongootti waan hin jirref jarreen miidhaman gara Beegiitti baqatan.
Obbo Haruun waan dhalate kana akka quba qabaniifi erga namoonni Toongootti ajjeefamanii booda hoggantoota aanaa Maa'oo Koomoo waliin akka hin dubbanne dubbatu.
Odeeffannoo qabaniinis namoonni 2 akka ajjeefaman, 12 yaalii dabalataaf akka ergamaniifi walumaa gala namoonni 40 akka miidhaman BBC'tti himaniiru.
Dabalataanis, hanga har'a ganamaatti namni kuma lama caalu gara Beegiitti baqachuu himaniiru.
Haa ta'u malee, yeroo ammaatti rakkoo kana furuuf jaarsoliin jarri Aanaa Toongoo gara Aanaa Beegiitti jaarsolii ergaa jiraachuu himaniiru.
Aanaan Maa'oo Koomoo naannoo Benishaangul argamuufi Aanaan Beegii Oromiyaa jala jirtu wal daangessu.
Fageenyi gidduu isaanii jirullee kiloomeetira 12 fagaata jedhan jiraattonni.
Aadaan geerarsaa maaliif laafaa dhufe?
'Oromoof nan wareegama malee Oromoo hin ajjeesu'
Labsiin baraarsaa mootummaa Itoophiyaa eenyu ilaallata?
Furmaata rakkoo interneetii baadiyyaa
Daldalli Ertiraa waliin taasifamu faara qabaa?
'Naannoleen humna nageenyaa walirratti bobbaasuu hin qaban'
Traamp, Putiiniin Ameerikaatti affeeran